Wendy Crewson – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The 6th Day (2000) Unicode ဟောငျးပမေဲ့ ကောငျးနဆေဲ ခတျေမှီဆဲဆိုတာ ဒီလိုဇာတျကားမြိုးကို ဆိုလိုတယျထငျပါတယျ။ ငယျတုနျးက နားမလညျပဲကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ အာနိုးဇာတျကားကောငျးလေးပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ သိပ်ပံပညာတှထှေနျးကားနပွေီး သသှေားတဲ့ တိရစ်ဆာနျတှကေို တရားဝငျပုံတူကူးပီးပသတျရှငျအောငျလုပျလို့ရတဲ့ နညျးပညာထှနျးကားနတေဲ့ခတျေမှာပါ။ လူကိုတော့ တရားဝငျ ပုံတူကူးခှငျ့မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လူတှကေို တရားမဝငျပုံတူကူးရာကနေ အာနိုးနှဈယောကျဖွဈသှားပီး ဇာတျကားတှေ ရူပျလာတဲ့ ဘယျလိုဖွရှေငျးကမြလဲ ? ပုံတူကူးခံရတဲ့သူကကော သူ့ကိုသူ လူအစဈထငျနမှောလား ? အာနိုးကကော ဘာကွောငျ့ ပုံတူကူးခံလိုကျရတာလဲ ? ဒီလိုစိတျဝငျစားစရာတှနေဲ့ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈ သိပ်ပံဇာတျကားတှေ ဘယျလောကျကောငျးလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွညျ့ပါအုံး Zawgyi ဟောင်းပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲ ခေတ်မှီဆဲဆိုတာ ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးကို ဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်တုန်းက နားမလည်ပဲကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အာနိုးဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သိပ္ပံပညာတွေထွန်းကားနေပြီး သေသွားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို တရားဝင်ပုံတူကူးပီးပသတ်ရှင်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းပညာထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်မှာပါ။ လူကိုတော့ တရားဝင် ပုံတူကူးခွင့်မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လူတွေကို တရားမဝင်ပုံတူကူးရာကနေ အာနိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပီး ဇာတ်ကားတွေ ...
IMDB: 5.9/10 114691 votes
The Vow (2012) ကိုယ်သာ အတိတ်မေ့သွားမယ်ဆို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ပြန်သတိရနိုင်မှာလားအချစ်တွေကိုရောမေ့သွားနိုင်မှာလားဇာတ်လမ်းကတော့ လီယို နဲ့ ပိခ်ျ့တို့ဟာ သိပ်ချစ်ကြတဲ့လင်မယားတွေပါ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကို ဖေးမရင်း ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်ကြသူတွေပါဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာ ကံဆိုးစွာနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်မှာ ပိခ်ျ့ဟာ မှတ်ဥာဏ်ပျောက်ဆုံးသွးပြီး သူမခင်ပွန်း လီယိုကို မမှတ်မိနိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်ပိခ်ျ့ဟာ လီယိုကို ပြန်မှတ်မိနိုင်မှာလား ဒါမှမဟုတ် လီယိုကိုရော လီယိုအပေါ်အချစ်တွေကိုရော လုံးဝပြန်မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူးလား…….လီယိုကရော ပိခ်ျ့ပြန်ချစ်လာအောင် ပြန်မှတ်မိလာအောင်လုပ်နိုင်မလားပိခ်ျ့က လီယို့ကိုပြန်မချစ်နိုင်တော့ပဲ ပိခ်ျ့ရဲ့အရင်ချစ်ရသူ ဂျဲရမီကိုပဲ ရွေးသွားမလား…………….. Credit Review